तपाईंको हत्केलाको आकार कस्तो छ ? साह्रै भाग्यमानी हुन्छन् हातमा एम(M) चिह्न भएका व्यक्तिहरु - Filmy News Portal Of Nepal
‘तपाईंको हत्केलाकाको अाकार कस्तो छ ? साह्रै भाग्यमानी हुन्छन् हातमा एम(M) चिह्न भएका व्यक्तिहरु’
हातका रेखाले पनि हाम्रोबारे धेरै कुरा बोल्छन् । ‘हस्तरेखा शास्त्र’का अनुसार हतकेला, पञ्जा र औंलाले हाम्रो भविश्यबारे धेरै संकेत दिन्छन् । यसले हाम्रो स्वभावको बारेमा पनि धेरै कुरा बताउँछन्, साथै हाम्रो भविश्य कस्तो छ भन्ने पनि यसबाट थाहा पाउन सकिन्छ । जुन मानिसलाई हस्तरेखा शास्त्रबारे थोरै पनि ज्ञान हुन्छ, उनीहरु यो जान्छन् कि हातको रेखाले भविश्यको सटिक अनुमान लगाउन सकिँदैन ।
किनकी हातका रेखाहरु व्यक्तिले गर्ने राम्रा नराम्रा कामले हरेक पल बदलिरहन्छन् । तर, हस्तरेखाको माध्यमबाट भविश्यका संकेतबारे अनुमान लगाउन सकिन्छ, जसलाई हामीले नकार्न सकिन्न । यदि हामीलाई भविश्यमा हुन सक्ने घटनाबारे पहिले नै जानकारी हुन्छ भने हामी त्यससँग जोडिएर आउने नराम्रो समयलाई पहिले नै टार्न सक्छौं । पूर्ण रुपबाट नभएपछि त्यसको नराम्रो असरबारे बच्न हामीले पूर्वतयारी त गर्न सक्छौं ।
ह’स्तरेखाको अध्ययनबाट हाम्रो व्यक्तिगत स्वभावको बारेमा जान्न सकिन्छ । हामीमा कस्तो स्वभाव छ, के कुरा मन पर्छ, हामीलाई कस्ता मानिसहरु मन पर्छन्, यी सबै जानकारी हस्तरेखाबाट पाउन सकिन्छ ।ह’स्तरेखाको अध्ययनबाट हामीले अन्य धेरै कुरा पनि जान्नसक्छौं, जो हाम्रो सामान्य जानकारीभन्दा धेरै हुन्छ । एक असल हस्तरेखा शास्त्रीले हामीलाई यसबारे जानकारी दिन सक्छ ।
हातमा खास अक्षर(M): खासमा हाम्रो हातको रेखामा एक खास अक्षर पनि लुकेको हुन्छ । यो अंग्रेजी अक्षर ‘एम’ हो । यदी कुनै व्यक्तिको हातको रेखालाई जोडेर यो अक्षर बन्छ भने ती व्यक्तिहरु धेरै भाग्मानी हुने मानिन्छ ।यस्ता व्यक्तिलाई ‘भगवानको सन्तान’ पनि भन्ने गरिन्छ । शास्त्रअनुसार त्यस्ता व्यक्तिमाथि भगवानको आशिर्वाद हुन्छ ।
जो व्यक्तिको हातको रेखाबाट‘एम’ अक्षर बन्छ, यस्ता व्यक्तिहरु धेरै बुद्धिमान हुन्छन् । यीनिहरु जुनसुकै काममा पनि आफ्नो प्रभाव छोड्न सक्छन् । साथै त्यस्ता व्यक्ति धेरै इमान्दार पनि हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिसँग मित्रता गर्ने तथा आफन्तहरुमा पनि त्यसको सकरात्मक असर पर्छ। एजेन्सी ।
यति राम्री ६ महिने छोरीलाई आफ्नै बुवाले…..
प्रधानमन्त्री निवास अगा’डी अष्ट्रिचको ‘ग’ङन’म स्टा’इल’ डान्स !
म’रेको मान्छेको शरीर जस्तै केक का’टेपछी